जब बैठकमा माधव नेपालले चोर औँला ठड्याउँदै नारदमुनी रानालाई भने- ....राजीनामा दिएर निस्कि' भिडियाे - News 88 Post
जब बैठकमा माधव नेपालले चोर औँला ठड्याउँदै नारदमुनी रानालाई भने- ….राजीनामा दिएर निस्कि’ भिडियाे
July 25, 2021 N88LeaveaComment on जब बैठकमा माधव नेपालले चोर औँला ठड्याउँदै नारदमुनी रानालाई भने- ….राजीनामा दिएर निस्कि’ भिडियाे
काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाकोअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद्हरुबीच ब्युँतिएको संसद्को विषयमा नोकझोक भएको छ। सोही क्रममा एमाले सांसद् नारदमुनी रानालाई एमाले वरिष्ठ नेता तथा सांसद् माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएर जान भनेका थिए।
बैठकको सुरुवातमा सांसद्हरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफूहरुको भेट भएको भन्दै आगामी दिनमा प्रभावकारी भूमिका निभाउनुपर्ने बताएका थिए। त्यसैक्रममा बोलेका एमाले (अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका) सांसद् नारदमुनी रानाले भने अदालतको परमादेशबाट सरकार फेरिएको र संसद् ब्युँतिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
रानाको अभिव्यक्ति आएपछि नेपालले उनलाई प्रतिमागीको मतियार भनेका थिए। ‘तपाईं प्रतिगमनको मतियार, बाहिर निस्किनुस्’, नेपालको भनाइ थियो,’तपाईंलाई मन लाग्दैन भने राजीनामा दिनुस्, निस्किनुस्।’
नेपालले बोलेपछि दिव्यमणि राजभण्डारी र दीपकप्रकाश भट्ट लगायतले उनलाई साथ दिएका थिए। त्यसपछि बैठक कक्षमा हो-हल्ला भएको थियो।
होहल्लामा कतिपय सांसद्हरुले प्रतिगमनका मतियारहरुलाई बैठकमा बस्ने अधिकार नभएको बताएका थिए। प्रतिवादमा रानाले आफूलाई बैठकका लागि किन खबर गरेको त? भनेका थिए।
एमालेकै सांसद भट्टले संसद्को विरुद्धमा जाने हो भने बोल्ने अधिकार नभएको बताएका थिए। राजभण्डारीले संविधानको विरुद्धमा कुरा गर्ने भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। ‘यो सरकार अदालतले बताएको होइन। जनताको प्रतिनिधिहरुले बनाएको हो’, उनले भने।
कतिपय सांसदहरुले रानालाई बैठकबाट निकाल्न सभापति पवित्रा निरौलालाई आग्रह गरेका थिए। समिति सभापति पवित्रा निरौलाले मुस्किलले बैठकलाई नियन्त्रणमा लिएकी थिइन्। त्यसपछि भने नेता नेपाल बाहिरिएका थिए।
संसदीय समितिमा सबै सांसद समान हुन्, मलाई बाहिर भनेर निर्देशन दिने माधव नेपालको हैसियत के हो ? : सांसद राना
निर्मलाका ह-त्या-रालाई कारबाही गर्न गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रचण्डले प्रदेश सभाबाट हटाएकी ज्वालाकुमारीलाई केन्द्रमा ओलीले मन्त्री बनाए
नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा विपुल पोखरेल निर्वाचित (हेर्नुहोस् कसको मत कति ?)
April 10, 2021 N88
पुल नबनाएको भन्दै वडाध्यक्षले ठेकेदारलाई कार्यालयमै थुनेपछि…
January 7, 2022 N88